KULMIYE Party » Bulshada Degmooyinka 31-ka May Iyo Sayla Oo Cudud Taageero Miisaan Leh U Muujiyey Xisbiga KULMIYE Bulshada Degmooyinka 31-ka May Iyo Sayla Oo Cudud Taageero Miisaan Leh U Muujiyey Xisbiga KULMIYE – KULMIYE Party
Bulshada Degmooyinka 31-ka May Iyo Sayla Oo Cudud Taageero Miisaan Leh U Muujiyey Xisbiga KULMIYE
HomeBulshada Degmooyinka 31-ka May Iyo Sayla Oo Cudud Taageero Miisaan Leh U Muujiyey Xisbiga KULMIYE
Hargeysa(Warbaahinta Xisbiga Kulmiye )-Bulshada ku dhaqan degmooyinka Sayla iyo 31-ka May (AYUUB), ayaa taageero ballaadhan u muujisay xisbul-xaakimka talada Somaliland haya ee KULMIYE iyo murrashaxiintiisa.
Munaasibad ballaadhan oo ay bulshada degmooyinkan ku dhaqani ku muujinaysay taageerada ay xisbiga KULMIYE u hayso oo maanta lagu qabtay Huteel Crown ee magaalada Hargeysa, ayaa wax aka qaybgalay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo uu horkacayo murashaxa madaxwayne ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi xubno ka mida golaha wasiirada, boqorre, siyaasiyiin, haween iyo haldoor kasoo jeeda bulshada xisbiga kusoo biirtay.
Waxgaradka, cuqaasha, saladiinta, boqorrada, labeenta iyo aqoonyahanka beesha ayuub oo madasha ka hadlay, ayaa caddeeyey inay beel ahaan taageero buuxda u hayaan xisbiga KULMIYE, isla markaana ay diyaar u yihiin inay codkooda iyo cuddudoodaba ku taageeraan xisbiga iyo murrashaxiintiisa.
Boqorka Guud Ee Beesha Ayuub boqor Cali Xuseen Kaahin oo Goobtaasi ka hadlay ayaa si cad u shaaciyay in isaga iyo beeshiisuba ay taageero buuxda u hayaan xisbiga kULMIYE iyo murashaxiintiisa, isla markaana ay cod buuxa ku taageeri doonaan.
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed kaahin axmed, wasiirka wasaaradda Diinta iyo Awqaafta sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo xildhibaan Obsiiye oo kamid ah mudaneyaasha aqalka wakiillada Somaliland oo madasha hadallo ka jeediyey, ayaa soo dhaweeyey taageerada aan kala hadhka lahayn ee ay beeshu u muujisay xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiintiisa.
Ugu Dambayn guddoomiyaha xibsiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaweyne ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi oo goobtaas Ka hadlay ayaa si kal iyo laab ah usoo dhaweeyey taageerada ay Beesha Ayuub u muujisay xisbiga KULMIYE, waxana uu ku boorriyey inay cod iyo cududba ku garab galaan dedaalka uu xisbigu ugu jiro inuu talada dalka markiisii labaad majaraha u qabto.